Otu esi eme ka WhatsApp ghara inwe koodu nkwenye - Mobile Forum | Nzukọ Ekwentị
Otu esi eme ka WhatsApp ghara inwe koodu nkwenye
Kemgbe mmalite ya na 2009 maka iOS (otu afọ gachara ọ bịarutere gam akporo), ngwa izipu ozi WhatsApp abụrụla ihe ejizi n'ụwa niile, ngwa nke taa karịrị ndị ọrụ 2.000, karịa n'elu nyiwe ozi ndị ọzọ dị ka Messsenger ma ọ bụ Telegram.
Kemgbe 2014 ọ bụ akụkụ nke ụlọ ọrụ Facebook, mgbe ha kwụsịrị nde 19.000, maka ịzụta nke ndị na-achịkwa adịghị enyocha n'oge ahụ na taa agaraghị enweta nkwado nke European Union. Beingbụ otu n'ime ngwa nke onye ọ bụla na-etinye mgbe ọ bụla ha gbanwere ekwentị, nchekwa mbụ.
1 Nchedo WhatsApp
2 Zọ iji nyochaa WhatsApp
2.1 Site na SMS
2.2 Site na oku
3 Mee ọ rụọ ọrụ WhatsApp na-enweghị koodu nkwenye
4 Enwetara m koodu nkwenye site na WhatsApp
5 Otu esi echebe akaụntụ WhatsApp
6 Gịnị bụ WhatsApp XNUMX-Nzọụkwụ Nyocha?
Na mgbe m na-ekwu maka nchekwa, ana m ekwu maka ụzọ dị iche iche ụlọ ọrụ na-enye anyị iji gbochie ndị ọzọ nwere ike izuru akaụntụ WhatsApp ma jiri ya na nọmba ekwentị anyị, ebe ọ bụ na ọ bụ naanị njirimara njirimara ka ikpo okwu ji eme ihe.
Telegram na Messenger na-eji usoro njirimara ndị ọzọ, ọ bụ ezie na anyị nwekwara ike iji akara ekwentị anyị, mana nhọrọ a abụghị iwu. Oge ọ bụla anyị gbanwere nọmba ekwentị anyị, WhatsApp na-eziga koodu ọnụọgụ 6 ka ọ bụrụ nọmba ekwentị anyị tinyere, koodu na-enye gị ohere nyochaa na anyị bụ ndị ziri ezi nwe nọmba ekwentị na anyi ji.
Usoro a na-enye ohere jiri WhatsApp na ekwentị nwere nọmba dị iche nke anyị na-eji, mana n'otu oge ahụ, ọ bụkwa ihe egwu nchekwa ebe ọ bụ na ndị enyi ndị ọzọ nwere ọ dị mfe izuru nọmba WhatsApp.
Zọ iji nyochaa WhatsApp
N'ihe banyere inyocha na anyị bụ ndị nwe ziri ezi nke nọmba anyị chọrọ iji WhatsApp, usoro izipu ozi na-enye anyị nhọrọ abụọ:
Site na koodu ọnụọgụ 6 nke ị na-ezitere anyị n'ụdị SMS na ama anyị.
Site na Oku ekwentị nke akụrụngwa ga-ekwupụta koodu ọnụọgụ 6 anyị chọrọ.
Site na SMS
Iji nyochaa nke ahụ anyi bu ndi kwesiri ndi nwe ya nke nọmba ekwentị anyị chọrọ iji site na ozi ederede (SMS) anyị ga-emerịrị usoro ndị a:
Ozugbo anyị meghere ngwa ahụ, pịa Nabata ma gaa n'ihu.
Mgbe ahụ ngwa anyị ga-arịọ ikike iji zitere anyị amamọkwa.
Mgbe ahụ anyị tinye nọmba ekwentị nke anyi choro iji WhatsApp.
Sekọnd ka nke ahụ gasịrị, anyị ga-enweta koodu SMS na ama anyị na ngwa ahụ ga-agụ na-akpaghị aka ma bụrụ onye na-elekọta ịbanye koodu natara.
Ọ bụrụ na ihe kpatara ya, ị naghị agụ koodu ahụ, anyị na-enweta ngwa Ozi, mepee ozi anyị natara wee tinye nọmba na WhatsApp.
Site na oku
Ọ bụrụ na anyị anataghị ozi ederede n'ime sekọnd ole na ole mgbe anyị banyerechara nọmba ekwentị, o yikarịrị ka anyị anataghị ya. Iji nweta koodu a, anyị aghaghị pịa Kpọọ m.
Sekọnd ole na ole ka e mesịrị, anyị ga-enweta oku ahụ (n'asụsụ anyị yana prefix mba ofesi nke Ireland +44) na-egosi nọmba nkwenye na anyị ga-ede na ngwa ahụ iji nwee ike iji ngwa izi ozi metụtara nọmba ekwentị anyị.
Mee ọ rụọ ọrụ WhatsApp na-enweghị koodu nkwenye
Dị ka anyị hụworo na ngalaba gara aga, WhatsApp na-enye anyị ụzọ abụọ dị iche iche iji chọpụta na anyị bụ ndị nwe iwu ziri ezi nke nọmba ekwentị ahụ, naanị ụzọ abụọ enwere ike ime ya: site na SMS ma ọ bụ oku ekwentị.
WhatsApp agaghị akpọtụrụ anyị site na usoro ọ bụla karịa nke a. Ngwa enyeghị anyị ohere ịmepụta ozi-e ebe ha zigara anyị nọmba nkwenye na enweghị ọnụ ọgụgụ ahụ, ngwa ahụ agaghị enwe ike ịnweta sava ụlọ ọrụ ahụ wee kpọtụrụ ndị ọrụ niile na-eji ya kwa ụbọchị.
Na ịntanetị ị nwere ike ịchọta ụfọdụ ibe weebụ ma ọ bụ vidiyo YouTube nke na-emesi gị obi ike na ọ ga-ekwe omume ịnweta koodu nkwenye ahụ awụgharị naanị nhọrọ abụọ na WhatsApp na-enye anyị. Onweghi otu uzo o gosiputara oru, o nweghi nke o bula.
Ọ bụrụ otú ahụ, onye ọ bụla ga na-eme ya, karịsịa ndị ọkachamara na ndị ọkachamara na ndị enyi nke ndị ọzọ. Na ịntanetị nke anyị maara ma jiri kwa ụbọchị, enweghị ụzọ iji zoo ma ọ bụ belata ohere ịnweta ozi nke ụdị a. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume inyocha WhatsApp na-enweghị koodu nkwenye, ozi a ga-adị na Web Gbara Ọchịchịrị (ka ọ ghara inwe mgbagwoju anya na Web miri) ma ọ gaghị abụ n'efu ma ọ bụ ọnụ ala.
Enwetara m koodu nkwenye site na WhatsApp
WhatsApp na-eziga SMS na koodu nkwenye site na sistemụ nchekwa pụrụ iche na egosighi nọmba ekwentị onye zitere, ọ na - egosi naanị na WhatsApp na - ezitere anyị ya. Ọ bụrụ na anyị natara, na-enweghị ịrịọ ya, nọmba nkwenye nke akaụntụ WhatsApp, ọ bụ n'ihi na mmadụ na-anwa ịnweta akaụntụ anyị n'elu ikpo okwu a.
Ọ bụrụ na anyị anata oku ekwentị ma ọ bụ ozi ederede na-arịọ koodu ahụ, Anyị ekwesịghị ịzaghachi ozi ahụ, ebe ọ bụrụ na anyị emee, ọ ga-enwe ike iji nọmba ekwentị anyị dị ka akaụntụ WhatsApp ya.
Ọ bụrụ na site na nzuzu anyị daba n'ọnyà, dabara nke ọma azịza ya dị nnọọ mfe,, ebe ọ bụ naanị na anyị ga-apụ na WhatsApp wee rịọ koodu nkwenye ọzọ mgbe ịbanye na ngwa ahụ maka oge mbụ.
Otu esi echebe akaụntụ WhatsApp
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ichedo akaụntụ anyị ka onye ọ bụla ghara ịnweta ya, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị a paya ntị na ndụmọdụ m kwuru na ngalaba gara aga, WhatsApp na-enye anyị Nyocha abụọ.
Gịnị bụ WhatsApp XNUMX-Nzọụkwụ Nyocha?
Nkwenye nzọụkwụ abụọ nke WhatsApp na-enye anyị ohere ịmepụta PIN, nọmba koodu nke naanị anyị kwesịrị ịma inwe ike hazie nọmba ekwentị anyị na ngwa ahụ. Ọ bụrụ na anyị echefuru ihe, WhatsApp na-enye anyị ohere ịbanye email n'oge usoro ọrụ iji zere ịhapụ ohere ịnweta akaụntụ WhatsApp anyị.
Site na ozi email a anyị nwere ike gbanyụọ nkwenye nkwenye abụọ, ma ọ gaghị egosi anyị koodu nyocha anyị abanyela. Ọ bụrụ na anyị rụọ ọrụ nkwenye abụọ, ngwa ahụ ga-echetara anyị mgbe niile ka anyị tinye ya na ngwa ahụ iji zere ichefu ya.
Ọ bụrụ na anyị echefu PIN ma anyị abanyeghị email n'oge ebido nkwenye nke usoro abụọ, anyị ga-echere ụbọchị asaa na-enweghị iji WhatsApp ka ikpo okwu nwere ike ịchọpụta na nọmba ekwentị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet » WhatsApp » Otu esi eme ka WhatsApp ghara inwe koodu nkwenye
Ebe ibudata ma mepụta akwụkwọ mmado WhatsApp maka iPhone
Etu esi lelee mkpanaka na PC na mmemme ndị a n'efu